'कांग्रेसले आफ्नो कामको मार्केटिङ कहिल्यै गर्न सकेन' | GNN Nepal GNN Nepal 'कांग्रेसले आफ्नो कामको मार्केटिङ कहिल्यै गर्न सकेन' | GNN Nepal
अब केका लागि रगत बगाउने ? केका लागि युद्ध गर्ने ? अबका दिनमा नेपाली जनताले जित्नुपर्छ । विधि र पद्धतिले जित्नुपर्छ : मोहन बहादुर बस्नेत
वर्तमान नेपाली राजनीतिक घटनाक्रममा दैनिक उछाल आइरहेको अवस्था छ । यो राजनीति कहाँसम्म जाला ?
नेपालका राजनीतिक दलहरु जनताको भावनाभन्दा आफू अनुकूलमा अघि बढिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले हामी राजनीतिक दलहरुलाई सहजताको वातावरण दिएका छैनन् । यी परिवर्तनहरुको थोरबहुत जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ । यसले नेपालको स्थिति विकराल बनाएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त कदम नचाल्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । यतिबेला सत्ता टिकाउमा मात्र सरकारको ध्यान देखिन्छ । यस अर्थमा मुलुक एउटा गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ ।
यतिबेला कांग्रेसले मात्र चाहेर सत्ता परिवर्तन हुने अवस्था छैन । हामीले पटकपटक सरकारलाई सच्याउन विरोधहरु निरन्तर गर्दै आइरहेका छौं । जनतालाई घरभित्र राख्ने तर उनीहरुका लागि कुनै राहतका प्याकेजहरु उपलब्ध नगराउने सरकारी रबैया यतिबेला हावी छ । यतिबेलै सरकार भ्रष्टाचारमा चुलुम्र्म डुबेको छ । संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्न छाडेन । त्यसैले यो सरकार जनताका नजरमा पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा जाला अथवा अन्य कुनै पार्टी सरकारमा जालान । कोरोनाका कारण जनता आतंकित भइरहेका छन् । राजनीतिक दललाई भने सत्ताकै उन्माद चलिरहेको छ । यो सत्ताकेन्द्रित राजनीति कहिलेसम्म ?
अब केका लागि रगत बगाउने ? केका लागि युद्ध गर्ने ? अबका दिनमा नेपाली जनताले जित्नुपर्छ । विधि र पद्धतिले जित्नुपर्छ । चुनाव भइरहने व्यवस्थालाई जोगाउनुपर्छ । यसो भयो भने आज हारेपनि भोलि जित्न सकिन्छ । यसका लागि सबैले दम्भलाई हटाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । यसो भयो भने जनतालाई धेरै राहत हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो समर्थन नगर्नेहरुलाई दुस्मनको रुपमा हेर्ने गरेको छ । सरकारको गलत क्रियाकलाप र असावधानीले जनतालाई सास्ती दिने गरेको छ । सरकार भनेको जनताका लागि जतिबेला पनि खटन सक्ने हुनुपर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा भएकै छैन । तर यो सरकारलाई त्यसको उद्घाटन गर्न हतारो भयो । जुन पानी पिउन योग्य छैन ।
अन्त्यमा यो राजनीतिले कहिले निकास पाउला ?
यो राजनीतिको निकासका लागि तिथि मिति तोकेर भन्न सकिन्न । तर एउटा कुरा नेपाली कांग्रेसले आफूले गरेको कामको मार्केटिङ कहिल्यै गर्न सकेन । पहिलो गल्ती । कम्युनिष्टहरुले सत्तामा पुग्नका लागि जे पनि बोलिदिने । यो दोस्रो गल्ती । यतिबेला नेपाली कांग्रेस केही रुपमा निर्णायक अवस्थामा छ । हामीले उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ ।
अमेरिकी निर्वाचन लाईभ अपडेट : हालसम्म डेमोक्र्याटलाई २३८ र रिपब्लिकनलाई २१३ मत प्राप्त
पत्रकारलाई तथ्य कुरा बुझेर निष्पक्ष भइ समाचार लेख्न आग्रह
असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म मलमास, के गर्न हुन्छ के हुन्न ?